स्वयम्भूका बाँदर र कुकुर भोकभोकै मर्ने स्थितिमा – Krazy NepaL
May 23, 2021 278
तस्बीर : महेश्वर के.सी. न्यूज २४
काठमाडौं । मानिसहरुको आवागमन नभएपछि स्वयम्भूका बाँदर तथा कुकुरहरू भोकभोकै मर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । निषेधाज्ञापछि मानिसहरुको आवागमन घट्नुको साथै सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएका कारण त्यहाँका जनावरहरूले पनि खानेकुरा नपाएर समस्यमा परेका हुन् ।
मानिसहरूकाे चहलपहल हुँदा बाँदर तथा कुकुरहरूले खानेकुरा पाउने गर्थे । तर निषेधाज्ञापछि खानेकुरा नपाएर बाँदर तथा कुकुरहरू बिरामी र कमजोर भएको स्वयम्भू गेटमा चौकिदारी गर्दै आएका एक युवकले बताउनुभयो ।
उहाँले बिहान-बिहान आउने केहीले बाँदर र कुकुरको दयनीय अवस्था देखेर खानेकुरा दिनु भनेर प्रदान गर्ने सानाेतिनाे पैसाले बिस्कुट किनेर दिँदै आएको उहाँकाे भनाइ छ । सामान्य खानेकुराहरु दिँदै गर्दा पनि केही बाँदरहरू भने बिरामी परिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो।
विगतमा मानिसहरुको भीडभाड हुने भएकाले कोही न कोहीले केही न केही खानेकुरा दिने गरेको तर अहिले त्यो अवस्था नरहेकोले बाँदर र कुकुर भोकमारीको चपेटामा परेको उहाँकाे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यहाँका बाँदर र कुकुरहरू अत्यन्तै भोकमरीको चपेटामा छन् । बिहान-बिहान मर्निङवाकमा आउने केहीले बादरलाई खानेकुरा किनेर दिनु भनेर पैसा दिन्छन् । त्यही पैसाले बिस्कुट किनेर दिँदैछौं । तर पनि केही बाँदर, कुकुर बिरामीजस्तै देखिएका छन् । पहिले पहिले त विदेशीहरू आएर धेरैधेरै खानेकुरा दिन्थे, अहिले त्यो अवस्था पनि छैन ।’
काठमाडौं शहरको बीचमा पर्ने स्वयम्भूमा सानो क्षेत्रफलमा सामान्य जंगल मात्रै छ । सो जंगलमा बाँदरका लागि खाने आहार खासै छैनन् । उता कुकुरका लागि भने जंगलमा खाने कुरा पाउने नै भएन । उनीहरुलाई बाँच्नका लागि मानिसहरुकै भर पर्छ । स्वयम्भूका बाँदर तथा कुकुरलाई पानी पिउन पनि समस्या परेको छ ।
त्यहाँ प्रायः घुमन्तेहरुले दिएकै कुरा खाएको सहारामा बाँचिरहेका कुकुर र बाँदरलाई डाँडादेखि केही मुनि रहेको पानीको धारा र प्लाष्टर गरेको दहमै पस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
केही बाँदरहरु भित्र पस्न नसकेर बेलाबेला आउने धाराको टुटीमा झुण्डिरहेका देखिन्थे । चौकीदार युवकका अनुसार ती बाँदरहरु त्यही आएर पानी खाने गर्छन् । कुकुरलाई भने आफैँले भाँडाेमा पानी राखिदिनुपर्छ ।
स्थानीयको घरघरमा बाँदर
स्वयम्भूको डाँडामा खानेकुरा नपाएका बाँदरहरु स्थानीयको घरघरमा पस्न थालेका छन् । स्वयम्भू डाडाँको फेदीतिरका घरहरुमा बाँदरहरु खानेकुरा खोज्दै आउन थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कहिल्यै नआउने बाँदरहरु पनि निषेधाज्ञापछि घरघरमा आएर डुल्न थालेको स्थानीहबासी बताउहुनुहन्छ । स्थानीय एक वृद्धले भन्नुभयो, ‘सधैँ आउदैनथे बाँदर । अहिले निषेधाज्ञापछि आउन थालेका छन् । घरघरमा पस्नसमेत भ्याउँछन् । हामीले माया लागेर केही खानेकुराहरु दिने गरेका छौँ ।’
पशुपतिमा पनि उस्तै
नेपालकै प्रतिष्ठित र प्रसिद्ध मन्दिर पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका बाँदर ताथ कुकुरहरु पनि भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । सामान्य अवस्थामा दैनिक भीड लागिरहने दर्शनार्थी र घुमन्तेहरुले विभिन्न खालका खानेकुराहरु दिने गरेका थिए । तर निषेधाज्ञाका कारण मानिसकाे प्रवेश शुन्य भएकाले पशुपतिका बाँदर र कुकुरहरुलाई भोकमरी लागेको हाे ।
जुनसुकै मानिस पनि त्यस् क्षेत्रमा पस्दा खानेकुरा दिने आशमा बाँदरहरू नजिकै आउने गर्दछन् । सडकमा फालिएका चाउचाउ लगायत खाेनकुराका प्याकेटमा केही खानेकुरा बाँकी छ कि भन्दै उनीहरुले खाेस्रने गर्छन् ।
बाँदरहरु पनि भोकले फोहोर फाल्ने डस्टबिनहरु खोतल्दै पहिल्याउँदै फालिएका फ्रुटी तथा प्लाष्टिकहरु बोकेर हिँडिरहेको पाइएको छ । छेवैमा कोरोना भाइरसबाट निधन भएका मानिसहरुको शव जलाइरहेको दृश्य देखिन्छ भने वरिपरि बाँदरहरुलाई भोकले च्यापेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
बाँदरहरू मानिसको शव जलिरहँदा पनि आत्तिएर एक-अर्कामा टाँसिँदै रोदन पोखेझैँ वा शाेक मनाएझैँ गर्ने गरेकाे घाट वरपर बस्नेहरू बताउँछन् ।
Prevतपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा
Nextमुलुकभर ७ हजार ९१४ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, १९३ को मृत्यु
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (42763)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17569)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13076)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (12448)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (11634)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11158)